Iprototype yemoto ezimeleyo ye-Apple ekugqibeleni ibonwa esitratweni | Ndisuka mac
Iprototype yemoto ezimeleyo ye-Apple ekugqibeleni ibonwa esitratweni
Ukuba ubukholelwa ukuba uluvo lokuba iApple yayisemva kokuba inokwenzeka imoto yophawu ilahliwe ngonaphakade, buyela kuhlaselo kwaye ngeli xesha ngohambo lokuqala lwayo ngokuzimeleyo. I-Lexus RX450h SUV ibonakele ishiya esinye sezakhiwo zika-Apple ilayishwe ngokupheleleyo ngabenzi boluvo kunye nezixhobo.
Kufunyenwe kujikeleza kwizitrato zaseCalifornia kwaye kwabo bakubonileyo kungaphezulu kokuqinisekiswa ukuba iApple sele ikwisigaba sokuvavanya ukuba yeyiphi ingcinga yayo elandelayo, imoto eqhuba ngokwakho, ikamva elifana neTesla kodwa yinyani.
Ukuba uqaphele ukuba siyichazile le moto njengemoto ezimeleyo kwaye le nkampani yeapile elilumkileyo kwiveki ephelileyo ifumene imvume kwabasemagunyeni yeemoto ezintathu Ukulungiswa kweLexus RX450h iiSUV zinokujikeleza ngokuzimeleyo phantsi komyalelo wabaqhubi abathandathu abafanelekileyo.
Ngoku uyasiqonda isizathu sokuba siqinisekise ukuba into ezayo yimoto ezimeleyo? Ngoku, njengoko sele ubonile, iimoto ezisetyenzisiweyo zivela kuhlobo lweLexus, ethi njengoko uyazi inxulunyaniswe neToyota. Enye yezinto ezinokuthi ziqwalaselwe kukuba ngenye imini iimoto zeLexus ziya kuza nezixhobo ze-Apple kwaye ke ngoko Yenzelwe eCalifornia ziinqwelomoya iLexus kunye neApple.
Okwangoku, sinokulinda kwaye silandele imikhondo ethi iApple isishiye kwindlela etyheli etyhutyha sonke esifuna ukuhamba ngayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Iprototype yemoto ezimeleyo ye-Apple ekugqibeleni ibonwa esitratweni
Lawula imifanekiso yakho yoqhakamshelwano neMifanekiso yoQhakamshelwano
I-Acer yazisa nge-4k esweni esitsha ngonxibelelwano lwe-USB-C oluhambelana ne-15-intshi iMacBook Pro